मस्जिद सफा गर्ने भनेर लगेर कतारमा शौचालय सफा गराए
Mon, Apr 23, 2018 | 21:24:42 NST
17:39 PM (1 year ago)
पुस २१ – ‘तपाइँ त्यसको टन्टा नलिनु मसँग मस्जिद सफा गर्ने कामको कोटा छ उसलाई त्यहीँ पठाउँ धर्म पनि गर्छ अनि पैसा पनि कमाउँछ’ शेख गफारले यस्तो भनेपछि महमद सिफारिस टेलरलाई भारी बिसाए जस्तै भयो । महमद केही दिनदेखि छोरालाई विदेश पठाइदिने मान्छे खोज्दै हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसकै लागि उहाँ सर्लाहीबाट रौतहट पुग्नुभयो । घर आएकी बहिनीले मेरो सम्धीले विदेश पठाउँछन् भनेपछि उहाँलाई खोज्दै रौतहट पुग्नुभएको थियो । रौतहट पुगेपछि महमदले भेट्नुभयो बहिनीका सम्धी शेख गफारलाई । गफारले त्योभन्दा अघि पनि धेरैलाई विदेश पठाउनुभएको थियो । उनले अहिलेसम्म आफूले पठाएका सबैले राम्रो कमाइरहेको भनेपछि महमदले पत्याउनुभयो । ‘आफ्नै मान्छे भएपछि के शंका गर्नु थ्यो र’ महमदले भन्नुभयो ।
अमुल हसनका बावु महमद सिफारिस टेलर
उनले कुनै काम पाएका थिएनन् । त्यसैले भविष्यमा के गर्ला भन्ने चिन्ताले सताइरहेको थियो । गाउँमा केही नभएपनि विदेश गयो भने त कमाएर केही गर्ला कि भन्ने त महमदलाई एक डेढ वर्षअघि नै लागेको थियो । तर पठाउने विश्वासिलो मान्छे फेला पार्नुभएको थिएन । त्यसैले परिवारमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थिएन । बहिनी आएको त्यो दिन महमदले छोरा अमुल हसनलाई विदेश जाने हो त ? भनेर सोध्नुभयो । अमुलले उतर दिनुभन्दा अगाडी सँगै रहेकी महमदकी बहिनीले ‘गए भइगो नी यहाँ काम पाइँदैन बरु मेरो सम्धीले विदेश पठाउने काम पनि गर्छन्’ भन्नुभयो । उहाँले आफन्तबाट गयो भने ठगिने सम्भावना पनि कम हुन्छ भनेपछि अमुलले पनि सहमति जनाउनुभयो ।
बहिनीको प्रस्ताव अनुसार उहाँ भोलिपल्ट रौतहट पुग्नुभयो । रौतहटको गमरिया गाविसमा पुगेपछि भेट्नुभएको हो शेख गफारलाई । भेट्ने बित्तिकै गफारले मैले २/३ सय जनालाई विदेश पठाई सकें भनेपछि महमदलाई बल्ल सही मान्छे भेटें भन्ने लाग्यो । त्यसैले त्यति बेलै छोरा अमुललाई विदेश पठाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले छोरो अल्लारे नै भएकाले सजिलो काममा पठाइदिनुहोला भनेपछि शेखले मस्जिदको काममा पठाइदिने बताए । त्यसका लागि १ लाख ५० हजार लाग्छ भनेपछि अरु सबै बिर्सिए जस्तै गरेर महमद पैसा जोहो गर्न तिर लाग्नुभयो ।
आफूसँग डेढ लाख थिएन । एक दुई जनासँग माग्नु पनि भयो तर दिएनन् । दिनेले धितो राख्नुपर्ने बताए । धितो राख्न उहाँसँग १० धुर घडेरी बाहेक केही थिएन । त्यसैले त्यही घडेरी ऋण दिने व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएर सयकडा तीन रुपैयाँका दरले पैसा लिनुभयो । पैसा जुटाएपछि गफारले अमुलसँगै महमदलाई पैसा लिएर काठमाडौं नै बोलाए ।
काठमाडौं आएका महमदका बाबुछोराले गफारलाई डेढ लाख रुपैयाँ बुझाए । ‘त्यो मध्ये ४० हजार रुपैयाँ हाम्रै अगाडी उसले निकालेर खल्तीमा हाल्यो अनि यो चाहिँ म्यानपवारलाई भनेर गयो’ महमद भन्नुहुन्छ । पैसा बुझेपछि गफारले सबै प्रक्रिया पूरा भएको बतायो ।
छोरा विदेश जाने सबै प्रक्रिया गर्दा र घरदेखि काठमाडौं र काठमाडौंदेखि घर र बस्दा खाँदा र भाडा गरेर ७० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै सकियो । त्यसैले छोरालाई कतार पठाउन लागत पुग्यो २ लाख २० हजार रुपैयाँ । महमदले पैसा बुझाएको एक महिनामा अमुल कतार पुग्नुभयो २०७३ असोजमा ।
कतार उड्दै गर्दा अमुलले मस्जिदको कामको कल्पना गर्नुभयो तर उहाँ पुगेपछि न भनेको ठाउँ पर्यो न त काम नै । मस्जिदमा भनेर लगिएका अमुललाई स्टील कारखानामा पुर्याइयो । अनि काम लगायो कारखानाको शौचालय सफा गर्ने । त्यही भएर घरमा फोन गर्दा कामका बारेमा भन्न पनि चाहनुभएन । ‘उसले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ ठूलो छ तर काम के भन्नु र ! भन्यो’ महमद भन्नुहुन्छ, ‘मैले के हो त्यस्तो भनेर भन भनेपछि मधुरो स्वरमा शौचालय सफा गर्ने भन्यो ।’ अमुलले बुवालाई काम फरक परेको मात्रै सुनाउनुभएन । मेनेजरसँग काम फरक परेको बारे कुरा गर्दा काम गर्ने भए गर नभए घर फर्कि भनेको कुरा पनि सुनाउनुभयो । केही दिन अघिसम्म छोरालाई आफन्तमार्फत विदेश पठाएर राम्रो गरें भन्ने सोचिरहेका महमदलाई त्यसपछि भने पछुतो लागिरहेको छ ।
छोराको कुरा सुनेपछि महमद गफारको घर पुग्नुभयो । तर ऊ भेटिएन । छिमेकीसँग कुरा गर्दा महमदले गफारको वास्तविकता थाहा पाउनुभयो । गफारले पठाएर धेरैले भनेको काम र तलब पाएका रहेनछन् । छिमेकीले फेसबुकमा विदेश गएकाहरुले गफारका बारेमा भनेका कुरा देखाएपछि उहाँलाई ठूलो समस्यामा परे जस्तो लाग्यो । घर फर्किएर छोरालाई फोन गरेर गफारका बारेमा सबै कुरा सुनाउनुभयो महमदले । छोराले केही जवाफ दिएनन् । त्यतिकै फोन काटिदिए ।
कुरा भएको एक महिनामा अमुल घर फर्किनुभयो । सुपरभाइजरसँग दिनदिनै रोइकराइ गरेपछि उसैले टिकट गरेर अमुललाई नेपाल फर्काइदिएको हो । छोरा घरमा आएपछि महमदले गफारलाई फोन गर्नुभयो । गफारले चार वटा नम्बर दिएको थियो उहाँलाई । तिनै नम्बरमा धेरै दिन फोन गरिरहेपछि फोन उठ्यो । गफारसँग महमदले भनेको काम दिलाउन नसकेकाले पैसा फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो । तर गफारले उत्तर दिए ‘मैले त ४० हजार रुपैयाँ मात्रै लिएको हो । त्यसैले म्यानपावरसँग कुरा गर्नु ।’ त्यसपछि उनको फोन लागेन ।
पैसा फिर्ता माग्दै उहाँ म्यानपावरमा पनि पुग्नुभयो । तर म्यानपावरले अमुललाई विदेश पठाउँदा जम्मा ६५ हजार मात्रै लागेको र आफूले २५ हजार रुपैयाँ मात्रै लिएको भन्दै बाँकी पैसा गफारसँगै माग्न भन्यो । तर गफारको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
विदेश पठाइदिने एजेण्ट बेपत्ता भएपनि त्यति बेला लिएको २ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋणको ब्याज भने बढेको बढ्यै छ । अहिले महमदसँग ऋण लिएको पैसाको महिनाको ८ हजार ब्याज तिर्ने आयस्रोत पनि छैन । ‘छोराले अहिले यतै सानो तिनो काम गरेर ८/९ हजार रुपैयाँ कमाउँछ तर त्यो पैसाले घर चलाउनु कि ब्याज तिर्नु’ महमदले भन्नुभयो । अहिले उहाँ पैसा दिने व्यक्तिले भएको त्यही जग्गा पनि खाइदिने हुन कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ।